अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति : डोनाल्ड ट्रम्प या जो बाईडेन ?? – NawalpurTimes.com
अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति : डोनाल्ड ट्रम्प या जो बाईडेन ??
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक १८ गते ८:५७
काठमाडौं। संसारको शक्तिशाली देश अमेरिकाको शीर्षासनमा आगामी चार वर्ष को बस्ने होला? रिपब्लिकनका डोनाल्ड ट्रम्प या डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन? यसको फैसला हुन अब केही घण्टा मात्रै बाँकी छ।
महाशक्ति अमेरिकामा नोभेम्बर ३ तारिख, मंगलबारका दिन राष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुँदै छ। ४ तारिख नेपाली समयअनुसार एकाबिहानै त्यस मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाइसक्ने छ।
निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै गर्दा दुवै उम्मेदवारले महत्त्वपूर्ण राज्यहरुमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। ट्रम्पले पाँच राज्यको भ्रमण गरे। बाइडेनले पेनसिल्भेनियाका मतदाताको मन बुझे। डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडेनलाई निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न सर्भेक्षणले ट्रम्पभन्दा अगाडि रहेको देखाएका छन्। नयाँ एक सर्भेक्षणका अनुसार राष्ट्रपति चुनावमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चार राज्यमा बाइडेन अगाडि रहेका छन्।
गत निर्वाचन अर्थात् २०१६ मा भाग नलिएका र मंगलबारको निर्वाचनमा मत दिन अग्रसर रहेका मतदातालाई बाइडेन मन परेको उक्त सर्भेक्षणले देखाएको छ। न्युयोर्क टाइम्स तथा सियेना कलेजले गरेको मतदानको सर्भेक्षण अनुसार बाइडेन विस्कन्सिन, पेनसिल्भेनिया, फ्लोरिडा तथा एरिजोनामा ट्रम्पभन्दा अघि छन्। यसअघि दि टाइम्सले गरेको एक्जिटपोलमा पनि ७४ वर्षीय ट्रम्पलाई ७७ वर्षीय बाइडेनले उछिनेका थिए।
अमेरिकाको मतदान प्रणाली अनौठो खालको छ। अहिलेसम्म ९ करोड मतदाताले मत दिइसकेका छन्। यस्तो मतले होइन, इलेक्टोरल मतका आधारमा राष्ट्रपति चुनिन्छन्।
अन्तिम समयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ध्यान र ताकत पाँच राज्यमा लगाइदिएका छन्। लोवा, मिसिगन, नर्थ क्यारोलाइना तथा जर्जिया र फ्लोरिडामा उनी केन्द्रित हुन पुगेका छन्। चुनावी सर्भेक्षणले यी राज्यमा दुई उम्मेदवारबीच कडा टक्कर हुने देखाएका छन्।
वासिङ्टनमा ट्रम्पले आफ्ना समर्थकबीच आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकाको अर्थव्यवस्था सबैभन्दा उच्च गति अघि बढिरहेको बताएका थिए। उनले यी राज्यहरुमा २०१६ कै जसरी आफ्नो जित हुने घोषणासमेत गरेका थिए।
उता, बाइडेनले भने आफ्नो ध्यान पेनसिल्भेनियामा केन्द्रित गरेका छन्। त्यो उनको जन्मस्थान पनि हो। जितका लागि त्यो राज्यलाई अहम् पनि मानिन्छ। २०१६ मा पेनसिल्भेनियामा ट्रम्पले निकै कम मतले जितेको थिए।
पछिल्लो समय अमेरिकामा नश्लीय विभेद बढेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको राष्ट्रवादी चिन्तनले नश्लवादलाई प्रश्रय मिलेको बताउने विश्लेषक थुप्रै छन्। साथै, विश्व महामारी कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा पनि ट्रम्प आलोचित छन्।